Feesbuuk fi Twitter akkaawntii Prezdaant Tramp irratti tarkaanfii fudhatan - NuuralHudaa
Feesbuukiin viidiyoo gabaabduu gaaffi fi deebisaa Tiraamp Fox News waliin godhe irraa kutamee maxxanfame haqee jira. Dhaabbatichi sababa haqeef ‘’Odeeffannoon dhimma Covid ilaalchisee fuula feesbuukii Traamp irrati bahe miidhaa dhaqqabsiisuu kan danda’u’’ jechuun ibse. Dubbii himaan dhaabbatichaa ibsa Arba’aa kaleessaa kenneen ‘’Viidiyoon sun gareen hawaasaa muraasni Covid-19 kan hin qabamne tahuu hima. Kun immoo odeeffannoo soba tahefi, imaammata nuti vaayirasii koroonaa ilaalchisee baasne ni faallessa’’ jedhe.
Haaluma walfakkaatuun Twitterinis hanga gareen Traamp viidiyoo sana haqutti akkaawuntii isaa akka hin fayyadamne ugguruu beeksise.
Traamp Viidiyoo kana irratti ”ijoolleen Covid19n hin qabaman” jedhe. Haata’u malee dhaabbatni Fayyaa Hawaasaa Ameerikaa ijoolleen Covid19n akka qabamuu danda’an ibsaafi gorsaa ture.
Ameerikaa keessatti yeroo ammaa namoota 4,973,741 vaayirasichaan qabaman jidduu namoonni 161,608 du’uu gabaafame. Gama biraatiin ammoo guutuu addunyaa keessatti lakkofsi namoota vaayirasichaan qabamanii miliiyoona 19 dabree jira. Namootni 711,858 ammoo sababa vaayirasii kanaatiin du’uu ragaaleen ni mul’isu.
o͎d͎d͎u͎ h͎a͎r͎a͎w͎a͎ n͎u͎f͎i͎ e͎g͎a͎a͎
Olaanaa Aliyi says:
As Wr Wb Odeefanoo haala Armani and muslima irrati gorsa nuuf Qoodaa QURANA irratis nu jajabessa haala gaarin hojecha jirtu haaluma kanan itti fufaa mamilaa kesan ta’u barbada isin qunamu nin danda’aa?.
August 4, 2021 sa;aa 1:10 pm Update tahe